सिके राउतसंग शंकास्पद सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ : कांग्रेस नेता, प्रदीप पौडेल | सु-सुचित नेपालको चित्र
सिके राउतसंग शंकास्पद सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ : कांग्रेस नेता, प्रदीप पौडेल
नेपाली राजनीतिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकार र नेपाल देश टुक्रयाउछु भन्दै हिड्ने स्वतन्त्र मधेको नारा लगाउने सिके राउतबीच भएको ११ बुधे सहमति र वर्तमान सरकारको अवस्था, नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा कांग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेलसंग अनलाईनपाना डटकमका प्रधान सम्पादक नारायण प्रसाद अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकार र सीके राउतबीचको सम्झौतालाई तपाँइ के भन्नु हुन्छ ?
सरकारले गुपचुपमा वार्ताको तयारी गरि सम्झौता गरेको छ । यसमा कत्तिको विश्सनियता छ भन्ने कुरा सरकारले जान्दछ । कसैले थाहा पाउला न कि भनेर सरकारले हतारमा आफुले मात्र जस लिन एकदमै ठुलो काम गरेको भान पार्न खोजेको छ र यसमा कसैको हात छैन भनेर सरकारले देखाउने धृष्टता गरेको देखिन्छ । सम्झौता पनि दुई अर्थ लाग्ने छ । यो सम्झौताले विखण्डन रोक्ने सरकारको दावी भएपनि यसले देश टुक्राउन सीके राउततलाई प्रसय दिएको छ ।
सरकार सीकेसँगको सम्झौता नै ठुलो काम हो भन्ने रणनीतिक प्रचारमा लागेको छ । सीकेसँग काधँमा काधँ मिलाएर भाषण गर्नु ठुलो काम होइन, सरकारले गह्रैजिम्मेवारपुर्ण काम गरेको छ, जुन सम्झौतापछि ओली सरकार सिकेको रक्षामा खटिएको देखिन्छ ।
ओलीको बुद्धि कहाँ चर्न गाको थियो ? देशको प्रधानमन्त्री हो उहाँ । उहाँका हरेक कुरा देशसँग जोडिन्छन, देशको भविष्यसँग जोडिन्छन, देशको अखण्डतासँग जोडिन्छन । तर उहाँले मनपरी गर्दै हिड्न पाइन्छ ?
सीकेले जनमत संग्रहको आधार तय भयो भन्दै भाषण र नाराबाजी गर्दै हिडेका छन्, यता सरकार होइन भन्छ, नेपाली कांग्रेसले कसरी बुझेकोे छ ?
पहिलो कुरा सीके राउत आफैमा विद्रोही हुन्, उनको पुरानो भाषामा भन्ने हो भने उनी विखण्डनवादी हुन् । उनले आफ्नो मात्र कुरा गरिरहेका छन्,। उनले पहिले पनि यहि कुरा गर्थे अहिले पनि यही कुरा गर्छन । तर दुइ तिहाईको कम्निस्ट सरकार आफूलाई राष्ट्रवादी हौं भन्ने अनि सीके राउतलाई जनमत संग्रहको बाटो खुल्ला गराउने सम्झौता गर्ने ?
अब जनताले सहि र गलत के हो भन्ने छुट्याउछन् प्रधानमन्त्रीले के के नै गरे भन्दै सम्झौता गर्ने तर त्यसको मसी सुक्न नपाउदै अहिले देश टुक्राउन पाइन्छ ? जनमतसंग्रह केही कुरामा हुन्छ सबै कुरामा हुदैन भन्ने चेतना सम्झौता गर्ने बेला कहाँ गाको थियो ? देशको प्रधानमन्त्रीको बुद्धि चर्न गाको थियो ? ओलीले गरेका हरेक कुरा देशसँग जोडिन्छन, देशको भविष्यसँग जोडिन्छन, देशको अखण्डतासँग जोडिन्छन । तर उहाँले मनपरी गर्दै हिड्न पाइन्छ ?
सीके राउतसँग सम्झौता गर्ने ओली राजद्रोही हुन् त ?
होइन ! म मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई अहिले नै राजद्रोही हुन् भनेर ट्याग लगाउन चाँहदिन, तर आशंका गर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री भएर गलत काम गर्ने, प्रचारका लागि काम गर्ने ? मैले सीकेलाई मिलाएको हुँ भन्दै सुरक्षागार्ड दिएर पठाएकोे भोलिपल्टै उनी जनकपुर गएर आफ्नै सेना/कमाण्डो प्रर्दशन गर्ने तर किन उनलाई आफ्नै सेनाले सुरक्षा दियो ? देश बिखण्डनका निम्ति वातावरण सृजना गरिसकेका रैछन् भन्ने कुरा त ओलीले सम्झौता गरेपछि बल्ल बजेका होलान नि ! उनीहरुले छुट्टै ढङले आफ्नो मागलाई पुरा गर्न पुर्व तयारी गरेका रैछन ।
देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो गल्ती गर्न मिल्छ ? यस्ता गल्ती कतिपटक गर्ने ? ओली जीबाट यस्ता गल्ती बारम्बार भएका छन् ? दुई तिहाईको सरकार छ भन्ने उहाँमा दम्भ छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पदीय मर्यादा अनुसार व्यवहार गर्न नजानेको विषय हो यो । सम्झौता पनि दुई अर्थी लाग्ने हुन्छ ? अर्कोकुरा ओलीले भनेको जस्तो सम्झौता नभएको कुरा त सीकेले नै पुष्टि गरिसकेका छन् नि !
जब नारा लाग्यो, ब्यानर र दस्ताबेज आयो तर सीकेलाई यस्तो नगर त भनेनन् नि ! कतै अब देशलाई विखण्डन गर्ने तिर लादैन, केपीले यो हाम्रो पुरानो दस्तावेज हो पनि भनेनन् ? यति भएपछि हामीले बुझ्ने कुरा यहि हो । पहिलो कुरा सरकार आफै अग्रसर भएर सम्झौता गर्यो ? सम्झौता गर्ने अर्कोपक्ष इमान्दार नभएपछि त्यो सरकार कसरी सहि थियो भन्नसक्छ ?
अर्को कुरा सम्झौता गर्ने पक्ष इमादार नभएर नियम उल्ङघन गरेपछि अब सरकारले भन्नु पर्यो कि हामीले धेरै गृहकार्य नगरी, धेरै सोधपुछ नगरी गरेको सम्झौता धोकापुर्ण भयो, हामीबाट ठुलो गल्ती भयो तसर्थ हामी देशबासी समक्ष माफी चाहन्छौ ।
के अब तपाईकाे विचारमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ?
यो पहिलो कुरा होइन, उहाँले धेरै हावादारी कुरा गर्नु भएको छ । सरकारले गरेको हरेक कुरा परिपक्क हुनुपर्ने हो तर सबै कुरा हावादारी र दम्भले भरिपुर्ण छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि के बोल्दा के हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो । जुनसुकै विषयमा पनि जनमत संग्रह हुने भनेपछि देश टुक्राउने खेलमा प्रधानमन्त्री पनि संलग्न छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघात गर्न मिल्दैन । यसमा ओलीले गम्भिर त्रुटी गरेका छन् । हामीले दुई तिहाईको रबैया हेरिरहेका छौ । अब ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनुपर्छ । राष्ट्रघातको गम्भीर गल्ती गर्दा पदमा बसिरहन मिल्दैन् ।
गायक राजु परियार टप फाइभमा आफ्ना यी गीतलाई अटाउछन्…
राजाले मेरो सरकार भन्न पाउने राष्ट्रपतिले किन नपाउने ? : विष्णु रिमाल
रुपान्तरित, व्यवस्थित, आधुनिक र सुदृढ बनाउँदै लैजानका लागि जागरण अभियान : प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा
देशको आर्थिक विकासका लागि १५ लाख युवाहरुको विकास सैनिक दल : युवा विश्लेशक ओली